Sedan Samand (ngokwezwi nezwi okusho "amahhashi amnyama") - emotweni, kuphela Iranian umenzi wezimoto Iran Khodro, lapho le nkampani yethulwa ngo 2006, emakethe Ukraine. Ngokusho abamele inkampani, imodeli entsha "Samand" noma "i-Nyakatfo Samand" senzelwe ukusetshenziswa kahle ezindaweni ezibandayo e. Ngo "uhamba nge" ku-akhawunti nezidingo kanye akuthandayo abashayeli bethu nezimfuneko ngamazwe kwemvelo.
ukubukeka Exquisite futhi imfashini, eliphakeme ukuphepha, ezemvelo, amandla kanye lula oyinhloko kokubili umshayeli nabagibeli. Imininingwane Iran Khodro Samand libekwe kahle manual for ukukhanda kanye nokugcinwa izimoto Iran Khodro Samand ukushicilela Ukrainian dwala.
Imoto kusekelwe imoto French Peugout 406. Okunethezeka base imodeli, elihlanganisa ezingeni lelisetulu ethokomele nephephile, ne handling esihle futhi omuhle Dynamics ukushayela. ukubukeka Elegant futhi imishini yezobuchwepheshe okuhambelana Samand. Sedan has konke ngoba ukuphumula okuhle nangenduduzo wonke umndeni wakho: futhi lokhu-moya futhi ikhompyutha ku-ibhodi, CD umdlali, phambi kakhulu futhi izihlalo ebanzi ngemuva, yokubeka front futhi abagibeli ezingemuva, amawindi asebenza ngogesi, kanye amakhasimende uyokhanga a capacious umthwalo gumbi umthamo 500 amalitha, ezizohlinzeka ithuba ukuthatha umndeni wakho wonke yikho konke okudingayo endleleni. Khona lokho izinga ehlonipheke kakhulu Yakha, ikhwalithi izinto ezishibhile. Onjiniyela akazange bayakhohlwa ukuphepha, ngoba, ikakhulukazi Samand TU5 ifakwe ABS, isikhwama somoya umshayeli, amabhande esivikelo emotweni nge pretensioners kubo bonke abagibeli yokukhanya.
Ekulungiseleni elula Samand Basic kuhlanganisa amandla ayo, ikhasethi umdlali, central locking, phambi amawindi asebenza ngogesi. Ngo Samand EL ungeze conditioner futhi Samand Norma - ngaphezu kwalokho, evuthayo izibuko Ingaphandle nge mkhosi kagesi amandla akha isondo-15-intshi. It uhlala esihlwabusayo kakhulu, okungukuthi Samand LX - ABS, yokupaka izinzwa, CD / MP3 nomsakazo izihlalo eziphambili ne ukulungiswa kagesi.
Amaklayenti azokuthanda isiqu capacious futhi okusezingeni eliphezulu zihlalo izimoto Thrift. Pendant "ihhashi" ku ngokulinganisela ukhululekile, owakhiwe kahle, futhi uma kudingekile - ezinzima. Ikhwalithi mdwebo, ngisho ezingeni izingxenye efanelekayo. Salon ukusebenza ngo amathoni ensundu, ngaphezu kwalokho, lapho ifaka plastic ngaphansi kwesihlahla kahle. Plastics ngezimoto uthambile, efana uhlobo indwangu. eselishova kokunethezeka, kakhulu ngobukhulu futhi ukushuba we bagel.
amakhasimende Ukrainian Iran Khodro inikeza inguqulo nge imishini oyedwa acebile, kodwa injini olukhulu 1.6 amalitha futhi okukhiphayo 110 amahhashi. Isebenza kuphela 5-ngesivinini gearbox manual. Ukusheshisa s 11.9 kuya ku-100, ijubane esiphezulu -. 185 km / h, isisindo izimoto - 1200 kg,
Ngithanda fingqa imigwaqo Ukrainian Iran Khodro Samand inketho kuhle. throughput Flawless, ukubukeka zikanokusho futhi ehloniphekayo, kugcineke, umthamo, intengo ifomula - izinga.
nemoto Excellent, otusekayo ezifaneleke indima imoto yokuqala futhi kuphela umndeni.
Tyres Yokohama Ice Guard IG35: ukubuyekezwa abanikazi. amathayi Car ebusika Yokohama Ice Guard IG35
Direction umculo ekuphileni kwebantfu
Izimpawu ngokusemthethweni isimo: zimelelani imibala ifulege Russian
Ukukhanyisa indawo yokusebenza ekhishini. Ikhishi: Ukukhanyisa kwe-LED